ULucy Parsons: U-Radical no-Anarchist, uMsunguli we-IWW
ULucy Parsons (malunga no-Matshi 1853? - Ngo-Matshi 7, 1942) wayengumdlali wokuqala we-socialism "wombala." Wayeyisunguli se- Industrial Workers of the World (IWW, "i-Wobblies") , umhlolokazi owabulawa "uHaymarket Eight", u-Albert Parsons, kunye nomlobi nesithethi. Njengomququzeleli kunye nomququzeleli omkhulu, wayenxulumene nokuhamba kweentlalo zexesha lakhe.
Imvelaphi kaLucy Parsons ayibhaliweyo, kwaye wayethetha ngamabali ahlukeneyo ngemvelaphi yakhe ngoko kunzima ukuhlenga inyaniso kwimbali.
U-Lucy mhlawumbi wazalwa njengekhoboka, nangona wayephikile nayiphi na ilifa le-Afrika, ebiza kuphela uhlanga lwabantu baseMerika naseMexico. Igama lakhe ngaphambi komtshato ku-Albert Parsons nguLucy Gonzalez. Usenokuba utshatile ngaphambi kowe-1871 ukuya ku-Oliver Gathing.
Ngowe-1871, u-Lucy Parsons owayenomthunzi omnyama watshata no-Albert Parsons, umThansu omhlophe kunye neyakuba yindoda yamaCompederate eyayibe yiRiphabliki eqinile emva kweMfazwe yoLuntu. Ukuhlala eKuxlu Klan eTexas kwakomeleleyo, kwaye kuyingozi kumntu ngamnye emtshatweni wobuhlanga, ngoko loo mbhangqwana washukuthela e-Chicago ngo-1873.
EChicago, uLucy noAlbert Parsons bahlala kwiindawo ezihluphekileyo kwaye babandakanyeka kwiQumrhu leNtlalo leDemokhrasi, edibene ne- Marxist socialism. Xa loo ntlangano yahlulwa, bajoyina iQela labaSebenzi be-United States (i-WPUSA, ezaziwa emva ko-1892 njenge-Socialist Labor Party, okanye i-SLP). Isahluko seChicago sadibana nekhaya leParsons.
ULucy Parsons waqala umsebenzi wakhe njengombhali nomfundisi, ukubhala iphepha leWPUSA, i- Socialist , nokuthetha kwi-WPUSA kunye ne-Working Women's Union.
ULucy Parsons kunye nomyeni wakhe u-Albert bashiya i-WPUSA kwiminyaka ye-1880 baza bajoyina inhlangano ye-anarchist, i-International Working People's Association (IWPA), becinga ukuba ubundlobongela buyimfuneko kubantu abasebenzayo ukuba banqothule ubuxhakaxhaka, kwaye ubuhlanga buza kugqitywa.
NgoMeyi, ngo-1886, bobabini uLucy Parsons kunye no-Albert Parsons babeyizinkokheli zesiteyimu eChicago malunga nomsebenzi weeyure ezisibhozo. Isiteleka sagqitywa ngobundlobongela kwaye kwabanjwe abasi-8 abahlaseli, kuquka no-Albert Parsons. Batsholwa uxanduva lokubamba ibhomu elalibulala amabutho amapolisa amane, nangona amaNgqina angqina ukuba akukho nanye kwezi sibhozo eziphosa ibhomu. Isiteyimu saza kuthiwa yi- Haymarket Riot .
ULucy Parsons wayengumkhokeli kwimigudu yokukhusela "iHaymarket Eight" kodwa uAlbert Parsons wayephakathi kwabantwana abane ababulawa. Intombi yabo yafa kungekudala.
ULucy Parsons 'Kamva
Waqala iphepha, Inkululeko , ngo-1892, kwaye waqhubeka ebhala, ekhuluma, eququzelela. Wasebenza kunye, phakathi kwabanye, u- Elizabeth Gurley Flynn . Ngomnyaka we-1905 uLucy Parsons wayephakathi kwalabo abasungula abaSebenzi beZwe ( iWobblies ) nabanye kuquka uMama Jones , beqala iphephandaba le-IWW e-Chicago.
Ngo-1914 u-Lucy Parsons ukhokelela imibhikisho e-San Francisco, kwaye ngo-1915 yahlela imiboniso ngokuphathelele indlala eyayibandakanya i-Chicago Hull House kunye noJane Addams, iPublicist Party, kunye ne-American Federation of Labor.
U-Lucy Parsons usenokuba wajoyina iqela lamaKomanisi ngo-1939 (uGale Ahrens uphikisana nale mabango aqhelekileyo).
Wafa emlilweni womlilo ngo-1942 e-Chicago. Amagosa karhulumente aphandle ekhaya emva komlilo aze asuse amaninzi amaphepha akhe.
Okunye NgoLucy Parsons
Uyaziwa nangokuthi: uLucy González Parson, uLucy Gonzalez Parson, uLucy González, uLucy Gonzalez, uLucy Waller
mhlawumbi wazalelwa ikhoboka kwisityalo saseTexas (wayephika ukuba nefa leAfrika)
Umyeni: UAlbert Parsons (otshatileyo 1871; umshicileli; owayengumkhosi we-Confederate;
Abantwana: UAlbert Richard (1879-?) kunye noLula Eda (1881-1889)
usenokuba watshata no-Oliver Gathing ngaphambi komtshato wakhe ku-Albert Parsons
Ashbaugh, uCarolyn. ULucy Parsons, uMongameli waseMerika . 1976.
Khetha iCoty Parsons Iingcaphuno
• Makhe sitshintshe ukungafani kobuzwe, inkolo, ezopolitiki, kwaye sibeke amehlo ethu ngonaphakade naphakade kwiinkwenkwezi ezikhulayo zeRiphabhulikhi yezabasebenzi.
• Inqweno yokungabandakanyeki ezalwe ngumntu ukuba yenzele enye into yokuba yithande, iyakuthandwa kwaye iyanconywe ngabantu, ukuba "yenze ihlabathi libe ngcono kangcono ukuba iphile kuyo," iya kumkhuthaza kwizenzo ezintle kunanini kunye nenzuzo yobugovu yokufumana izinto eziphathekayo zenzile.
• Kukhona intwasahlobo engumntu onobuchopho kulo lonke uluntu olungakhange luchithwe kwaye linyanzeliswe ngendlala kunye nobudaka phambi kokuzalwa kwakhe, oku kumenza aqhubeke phezulu.
• Siyinceku yamakhoboka. Siphathwa kakubi ngakumbi kunamadoda.
• I-Anarchism inomxholo ongapheliyo, ongaguqukiyo, "Inkululeko." Inkululeko yokufumana nayiphi na inyaniso, inkululeko yokuphuhlisa, ukuhlala ngokwemvelo kunye ngokupheleleyo.
• Ama-Anarchist ayazi ukuba ixesha elide lemfundo kufuneka lilandele naluphi na utshintsho olusisiseko kuluntu, ngoko ke abakholelwa ekutheni ivoti, okanye iiprojekti zezopolitiko, kodwa kunokuba kuphuculwe abantu abazicingayo.
• Ungaze ukhohliswe ukuba izityebi ziya kukuvumela ukuba uvote ubutyebi babo.
• Musa ukutyhila ambalwa ambalwa ngaphezu kweyure, kuba intlawulo yokuphila iya kuphakanyiswa ngokukhawuleza, kodwa yenza ukuba yonke into oyifumanayo, uyanelisekanga.
• Amandla akhuselekileyo anokuhlala esetyenziswa kwimfuno yabambalwa kunye neendleko ezininzi. Urhulumente ekuhlalutyweni kwalo kokugqibela lo mandla uncitshiswa kwisayensi. Oorhulumente akalokothi akhokele; ba landela inkqubela. Xa intolongo, isigxina okanye i-scaffold ayikwazi ukuthulisa ilizwi le-mbumbulu yokubhikisha, inkqubela phambili ishukunyathela kwisinyathelo, kodwa kungabi kude kube ngoko.
• Yonke into engcolileyo, i-lousy tramp ingakwazi ukuzakhela nge-revolver okanye ummese kwiimigangatho zebhotye yesityebi kunye nokugwaza okanye ukudubula abanikazi babo njengoko bephuma. Masibabulale ngaphandle kwemfesane, kwaye makube yimfazwe yokubhubha kwaye ingabi nabubele
• Awunakukhuseleka ngokupheleleyo. Kuba itotshi yomlilo, eyaziwa ngokungahlawulwanga, ayikwazi ukunqunyulwa kuwe.
• Ukuba, kumzabalazo okhoyo kunye neentloni ukuhlala, xa uluntu luhlelwe ngokunyanzela ukuhaha, inkohlakalo kunye nenkohliso, amadoda angabonwa abahlala bodwa kwaye bephantse bazimisele ukusebenzela okulungileyo kunegolide ukufunwa kunye noshutshiso kunokuba umgaqo wenkangala, ngubani onokungahambi ngesibindi kwi-scaffold yezinto ezilungileyo abanokuzenza abantu, sinokulindela ntoni kumadoda xa sikhululekile ekuthengiseni isidingo sokuthengisa isabelo esingcono sabo ngesonka?
• Abaninzi abanobhala abanobuchule babonise ukuba amaziko angalunganga asebenze ubuhlungu obukhulu kunye nokubandezeleka kubantu abaninzi aba neengcambu zabo kuorhulumente, kwaye kufuneka bakhokelele kuwo wonke amandla avela kurhulumente asikwazi ukuncedisa ukuba kukho yonke imithetho, isihloko ngasinye imisebenzi, yonke inkundla kunye nazo zonke iipolisa okanye ijoni eliphelile ngomso ngokutshatyalaliswa, siya kuba ngcono kunoko ngoku.
• Oo, i-Misery, ndiyisele indebe yosizi kwiintsimbi zayo, kodwa mna ndivukela.
• Inkcazelo yeSebe lePolisa laseChicago ichazwa ngoLucy Parsons: "Yingozi kunezigidi eziphandle ..."
Indlela uElizabeth Elizabeth II kunye noPrince Philip badibene ngayo
UkuQeqesha ngeZakhiwo zoLwakhiwo-iZakhiwo zoKwakha iziseko zokuPhalaza ukuSebenza kwakho
Ithini iCards Cup?
I-Inertia kunye neMithetho yokuFundisa
2016 US Vula: UJohnson ufumana okokuqala
Asatru - Norse Heathens of Modern Agaganism
3 Izinto eziphambili ze-Industrial Revolution e-US
Iiphakamiso ezili-10 eziphezulu zeRwala kunye neeprojekthi ezisezantsi
I-Chili Peppers - Iindaba zaseMelika zasekhaya
Indlela yokubhala kwiFrentshi